အားပါးပါး !!!!! ပုရိသအေပါင္းကို ရင္ဖိုလုပ္လိုက္တဲ့ သဇင္ဦး ရဲ႕ အၾကမ္းစားပံုမ်ား – Shwe Yoe
အားပါးပါး !!!!! ပုရိသအေပါင္းကို ရင္ဖိုလုပ္လိုက္တဲ့ သဇင္ဦး ရဲ႕ အၾကမ္းစားပံုမ်ား
ညို့အားပြင်းတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ပုရိသတွေကိုရင်ခုန်သံတွေမြန်အောင် ဖမ်းစားလိုက်ပြန်တဲ့သဇင်ဦး
သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ဗီဒီယိုလေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံးတင်လေ့ရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ သူမ ရဲ့ အမိုက်စားအလှတရားတွေနဲ့ ညို့ယူဖမ်းစားထားတဲ့ အလန်းစား ပုံလေးကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ပုံလေးဟာ ကြည့်ရှုသူတွေများပြားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပုရိသတွေအများဆုံး ဝန်းရံခြင်းခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပုံလေးထဲမှာ သဇင်ဦးတစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှုမှုရှိရှိနဲ့ လှရက်လွန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်အလှကတော့ မြင်သူတိုင်း ငေးလောက်အောင်ကို ညို့ယူဖမ်းစားနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်း သဇင်ဦး ရဲ့ အမိုက်စား ပုံလေးကို ကြည့်ရှုနိုင်စေရန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆက္ဆီက်က် ပိုစ့္အၾကမ္းေတြေပးေနတဲ့ ေမာ္ဒယ္ Alice Ong
ေႂကြခ်င္စရာေကာင္းလြန္းေနတဲ့ ပံုစံေလးနဲ႔ ရင္ဖိုစရာေကာင္းလြန္းေနတဲ့ ရွင္ယြန္းျမတ္
အိပ္ယာထဲက ရင္ခုန္ခ်င္စရာ အလွပုံရိပ္ေတြ ကို ထုတ္ျပ လိုက္ တဲ့ ေမျမင့္မိုရ္
ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိရွိ အမိုက္စားေဂၚ ေနတဲ့ အိေခ်ာပို ရဲ႕ အသဲယားစရာဗီဒီယိုဖိုင္